ဝါးခယ်မ : Cluster Munition - ဗုံးဗဒေသာ ဆိုသည်မှာ
Cluster Munition - ဗုံးဗဒေသာ ဆိုသည်မှာ
ဗုံးပဒေသာဟုခေါ်ဆိုကြသည့် Cluster Munition များသည် စစ်မြေပြင်တွင်ရန်သူအားစိတ်ဓါတ်ခြောက်ခြားစေသည့်ခဲယမ်းများအဖြစ်ထင်ရှားပါသည်။အခြားခဲယမ်းများ
များအတွင်းမှပင်ဗုံးပဒေသာများအားတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ယခု Post တွင် ဗုံးပဒေသာများအကြောင်း၊အသုံးပြုခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်း၊အမျိုးအစားများ၊ပိတ်ပင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနှင့်အ
Cluster Munition (သို့)ဗုံးပဒေသာဆိုသည်မှာပစ်မှတ်ဧရိယာအတွင်း Submunition (သို့) Bomblet ဟုခေါ်သည့်ဗုံးသားပေါက်များ ကိုဖြန့်ကြဲပေးနိုင်သည့်ခဲယမ်းတစ်မျိုးဟု
ခြေလျင်တပ်သုံးလက်နက်များတွင်အဆိုပါလိုအပ်ချက်အားတရစပ်ပစ်ခတ်ခြင်း Salvo Fire ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်ဟုထင်မြင်နိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်ခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလိုအပ်ချက်များအားဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် Cluster Munition များအား တိုးတက်တီထွင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြပါသည်။
Cluster များအားအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အသုံးပြုပစ်လွှတ်ပုံပေါ် မူတည်ကာပစ်ခတ်အသုံးပြုသော Tube Launched Type ၊ လေယာဉ်ဖြင့်ဗုံးကြဲချသည့် Air Dropped Container Type ၊ လေယာဉ်မှဗုံးသားပေါက်များအားတိုက်ရိုက်လွှတ်ချသည့် Aircraft Dispenser Type နှင့်ဒုံး/ပဲ့ထိန်းဒုံးအသုံးပြုပစ်ခတ်သည့် Rocket/Missile Type ဟူ၍(၄)မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။အစောဆုံး အသုံးပြုခဲ့သည့် Aircraft Dispenser Type တွင်ခြေလျင်တပ်သုံး အမြောက်လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်ဆင်တူသည့်ဗုံးသားပေါက်များအားလေယာဉ်တောင်ပံ(သို့)ကိုယ်ထည် Fuselage တွင်အတွဲလိုက်ချိတ်ဆွဲ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါဗုံးအတွဲလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအားစနက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးလေ
ယာဉ်မှူးအခန်း Cockpit မှတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဗုံးသားပေါက်များပြုတ်ကျသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့သတ်မှတ် Ballistic Trajectory အတိုင်းပစ်မှတ်သို့ကျဆင်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါစနစ်မှာရိုးရှင်းပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလများတွင်အသုံးပြုခဲ့သောပုံစံဖြစ်ကာ
လက်ရှိတွင်လည်းအချို့ဆိုဗီယက် Cluster ခဲယမ်းများတွင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါသည်။၄င်းစနစ်တွင် အသုံးပြုသောဗုံးသားပေါက်များမှာအရွယ်အစားအတန်ငယ်ကြီးမားပြီးထည့်သွင်းသည့်အရေအတွက်နည်း
ဖွဲ့စည်းပုံတွင်မူဆင်တူကြပါသည်။ပင်မဗုံးကိုယ်ထည်ဖြစ်သည့် Cargo Round တွင်ဗုံးသားပေါက်များ Bomblet ထည့်သွင်းရန်အကန့်ငယ်များ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားကြပြီးစနက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ချိန်တွင်
သို့လေယာဉ်အသုံးပြုကြဲချခြင်းနည်းလမ်းများတွင်လည်းပစ်မှတ်အနီးထိပျံသန်းရန်မလိုဘဲ Stand Off Bombing ဖြင့် ကြဲချနိုင်လာခဲ့ပါသည်။
Cluster Munition များအားဧရိယာပစ်မှတ်များအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်ဟုဆိုသော်လည်းပင်မှတ်အပေါ်ထိရောက်မှုအပိုင်းတွင်တိကျမှုမှာလိုအပ်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
အစောပိုင်းဗုံးပဒေသာများ၏ပစ်မှတ်အပေါ်တိကျမှု Accuracy မှာမကောင်းမွန်သော် လည်းနောက်ပိုင်းအသုံးပြုလာကြသည့်ခဲယမ်းများမှာနည်းပညာအကူအညီကိုယူ၍တိကျမှုကိုမြှင့်တင်လာ
ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ Cluster Munition များ၏တိကျမှုကိုတိုင်းတာရာတွင်သမားရိုးကျဗုံးများကဲ့သို့ဗဟိုလွဲချက် CEP (Circular Error Probable) ဖြင့်ပင်တိုင်းတာကြပြီး အမေရိကန်ထုတ် BLU-103A/B WCMD ဗုံးပဒေသာသည် CEP 26m အတွင်းရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ရာတွင်အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်မှာပင်မဗုံးကိုယ်ထည်၏
လုပ်ဆောင်မှုကိုသာတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ထည်အတွင်းထည့်သွင်းသည့် Bomblet ဗုံးသားပေါက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်မူ EEP (Elliptical Error Probable) ဆိုသောသတ်မှတ်ချက်အားအသုံးပြုကြပါသည်။
အဆိုပါဖြန့်ကြဲမှု Pattern များအတိုင်း ကျဆင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ဖြန့်ကြဲသည့်အမြင့်မြင့်မားလျှင်ဗုံးသားပေါက်များပြန့်ကြဲသည့်ဧရိယာကျယ်ပြန့်မည်
အတွင်းရရှိစေမည့်ပေါက်ကွဲမှုအမြင့် Height of Burst သည်အထူးအရေးပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ဗုံးသားပေါက်များသည်ဗုံးကိုယ်ထည်အပြင်ရောက်သည်နှင့်ဖန်တီးထား
များမြေပြင်သို့ကျဆင်းမည့်ဧရိယာပုံစံသည်ဘဲဥပုံ Ellip Shape ပုံစံဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ပြီးဒေါင်လိုက် ကျဆင်းကာအလုပ်လုပ်သည့်အမြောက်ကျည်အမျိုးအစားများတွင်ဗုံးသားပေါက်များမြေပြင်သို့ကျဆင်းမည့်
ဧရိယာပုံစံသည်မုန့်လက်ကောက်ပုံ Donut Shape ဖြင့်ကျဆင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ဗုံးပဒေသာတစ်လုံး၏ ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာမှာဗုံး၏အရွယ်အစား၊ဗုံးသားပေါက်ပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်ကာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာဧရိယာမှာအနည်းဆုံး 4000 Square Meter ခန့်ရှိနိုင်ပြီး၁၂၂မီလီမီတာဗုံးပဒေသာ အမြောက်ကျည်တစ်လုံး၏ထိရောက်မှုမှာအနည်းဆုံး 500 Square Meter ခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။
Cluster Munition များအားဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်ဝင်ရိုးစွန်းနိုင်ငံ များဖြစ်သည့်အီတလီနှင့်ဂျာမန်တို့မှစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး SD-2 Butterfly Bomb ဟုခေါ်သည့်လိပ်ပြာတောင်ဗုံးများကိုစတင် အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဗုံးပဒေသာခဲယမ်းအား
အများဆုံးအသုံးပြုသည့်စစ်ပွဲအဖြစ်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင်ဗုံးသားပေါက် Bomblet ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတင့်ဖျက်/ခွင်းစွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးရရှိအောင်ဖန်တီးလာကြပါသည်။၄င်း
ပုံမှန်ကန်စေရန်ဒလက်အသေများတပ်ဆင်ထားကာ Fin Stabilized Fragmentation Submunition ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ အခြားပုံစံတစ်မျိုးမှာဗုံးသားပေါက်ကျဆင်းချိန်ရရှိသည့်လေတိုးအားကိုအသုံးပြုကာစနက်ပိုင်းအားအ
သက်သွင်းပေးသည့် Spin Armed Submunition အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
သည့်ဗုံးသားပေါက်များအပြင် DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition) ဟူသည့်စွမ်းရည်မြင့်ဗုံးသားပေါက်များကိုပါဖန်တီး ထုတ်လုပ်လာကြပါသည်။ရှေးဦးပိုင်းပုံစံများတွင်ဗုံး
သို့ရာတွင်တင့်ဖျက်ခဲယမ်းတစ်မျိုးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သော Stand Off Distance နှင့်ဒလက်များတပ်ဆင်ရန်အတွက်အကွာအဝေးတစ်ခုလိုအပ်မည်ဖြစ်ရာယခင်ဗုံးသားပေါက်ဒီဇိုင်းများအတိုင်း
ပုံစံသည်အသုံးများသောပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်အနေဖြင့် WCMD (Wind Corrected Munition Dispenser) ဟူသည်ဗုံးသားပေါက်အမျိုးအစားအား CBU-97 ဗုံးပဒေသာစနစ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိရာဗုံးပဒေသာစနစ်များအနက်နည်းပညာမြင့်မားသည့်ခဲယမ်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
တွင်ရိုးရှင်းစွာပင်ခွင်းဗုံး (Anti Personnel) နှင့်တင့်ဖျက်ဗုံး (Anti Armour) ဟူ၍ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ မျိုးကွဲများရှိနိုင်သော်လည်းအခြေခံတည်ဆောက်ပုံအနေဖြင့်အဆိုပါအမျိုးအစားနှစ်မျိုးပေါ်တွင်သာအခြေပြု
အသုံးပြုမှုနှင့်မိုင်းအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော GICHD (Geneva International Centre fof Humanitarian Demining) အဖွဲ့အစည်း၏ ၂၀၁၆ခုနှစ်မေလတွင်ထုတ်ဝေသော A Guide to Cluster Munition(Third Edition) တွင်လည်းအသုံးပြုခွင့်မရှိသည့် Cluster Munition ဗုံးပဒေသာနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်ခဲယမ်းများအားအောက်ပါ အတိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်-
“Cluster Munition” meansaconventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms,and which includes those explosive submunitions.
(a)a munition or submunition designed to dispense flares,smoke,pyrotechnics or chaff;oramunition designed exclusively for an air defence role;
(c)a munition that’in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded submunitions,has all of the following characteristics:
(1)each munition contains fewer than ten explosive submunitions;
(2)each explosive submunition weighs more than four kilograms;
(3)each explosive submunition is designed to detect and engageasingle target object;
(4)each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction mechanism;and
(5)each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating feature.
Cluster Munition ဗုံးပဒေသာဟုမသတ်မှတ်ဘဲအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည် ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကိုက်ညီသည့် Bomblet ဗုံးသားပေါက်များအားဖန်တီးထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါသည်။
မှုမရရှိပါကလည်းသတ်မှတ်ချိန်တွင်အလိုအလျောက်ပေါက်ကွဲစေရန် Self Destruction စနစ်များတပ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပါသည်။ အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုများတွင်အလိုအလျောက်ပေါက်ကွဲစေရန်
အလိုက် Anti Personnel Effect ၊ Anti Armour Effect များအတိုင်းပေါက်ကွဲစေရန်(သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းပေါက်
အမေရိကန်နှင့်ရုရှတို့၏ဗုံးပဒေသာမျိုးကွဲများကိုဖော်ပြရပါကအမေရိကန်အနေဖြင့်ဗုံးပဒေသာများအား CBU Series (Cluster Bomb Unit) ဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးရုရှအနေဖြင့် RBK Series ဖြင့် ထုတ်လုပ်ကြပါသည်။နိုင်ငံအလိုက်အသုံးပြုကြသည့်ဗုံးသားပေါက်များအနက်မှထူးခြားသည့်စနစ်များ
တင်ပြရပါကအမေရိကန်၏ BLU-108 (Bomb Live Unit) နှင့် ADAM (Area Denial Artillery Munition) နှစ်မျိုးအားရွေးချယ်တင်ပြလိုပါသည်။ BLU-108 ဗုံးသားပေါက်များအား CBU-97 Sensor Fuze Wepon ဟု အမည်ရသည့်လေတပ်သုံးဗုံးပဒေသာတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတင့်ဖျက်ရည်ရွယ်ချက်များ
လုပ်ထားသကဲ့သို့ပစ်မှတ်မတွေ့ရှိပါကလည်း SD(Self Destruction) စနစ်ဖြင့်အလိုအလျောက် ပျက်စီးစေကာစစ်မြေပြင်အား Clean Field တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ADAM ခဲယမ်းအားမူခြေလျင်တပ်သုံး 155mm Howitzer အသုံးပြုပစ်ခတ် ရမည်ဖြစ်ပြီးပစ်မှတ်ဧရိယာအားပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုသည့်မိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ဗုံးသားပေါက်များ
ရှင်းသည့် Clean Field တစ်ခုဖြစ်သွားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Cluster Munition ဗုံးပဒေသာများအနေဖြင့်အသုံးပြုရာတွင် ထိရောက်သောအကျိုးရလာဒ်များရရှိနိုင်၍နိုင်ငံတကာတပ်မတော်များအနေဖြင့်ကန့်သတ်ချက်များ၏
ဖန်တီးထုတ်လုပ်အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ယခု Post တွင် Cluster Munition များ၏သဘောသဘာဝများ၊အသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ရခြင်းကြောင်းအချက်များနှင့်အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များအား
Posted by ဇာမဏီ at 6:16 PM
ဖန်မီးအိမ်လေးငြိမ်းသွားပြီ - ခင်နှင်းယု
ဦးနု နေအိမ် ပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း
အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေ့များ - နှောင်းသစ်
၀ါးခယ်မ အမှတ်တရ - အောင်မိုး